RASMI: Kooxda Arsenal oo dhammaystiray saxiixa Sambi Lokonga… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?) – Gool FM
(London) 19 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhammaystirtay saxiixa laacibka khadka dhexe ee Albert Sambi Lokonga, kaasoo ay kala soo wareegeen Anderlecht.
21-sano jirkaan ayay ka saxiixdeen heshiis waqti dheer ah, waxaana uu ku jiray da’yarka kooxda reer Belgium kaddib markii uu ku soo biiray sanadkii 2014-kii, waxaana isagoo 15-sano jir ah uu saxiixay heshiiskiisii ugu horreeyey ee xirfaddiisa professional-ka ah bishii November sanadkii 2017-kii.
Kulankii ugu horreyey waxa uu kooxda Anderlecht u saftay bishii December 2017, waxaana uu booska joogtada ah ka haystay kooxdaas labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, isagoo u saftay 78 kulan.
Waxa uu ka mid ahaa xiddigaha xulka qaranka Belgium ee da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada, Albert ayaana looga yeeray xulka qaranka waa weyn bishii Maarso ee sanadkii 2021, markaasoo uu ahaa beddel aan la isticmaalin kulankii ay ka horjeedeen Giriigga.
Laacibkan khadka dhexe ayaa xiddigihiisa cusub ee Arsenal, maalmaha soo aaddan kula midoobaya kulammada isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
Albert Sambi Lokonga ayaa Arsenal u xiran doona sida ay kooxdu shaacisay lambarka 23-aad.